Xuzhou Dinghua Construction Machinery Co., Ltd. bụ otu n'ime ndị kasị asọmpi na magburu onwe suppliers nke XCMG Group.
Anyị na-enye akụkụ igwe na XCMG, Caterpillar, Heli Forklift, Liugong, Lingong na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ a ma ama na China.
Anyị XSL usoro mmiri nke ọma drilling rigs, XZ usoro kwụ directional drilling rigs na XR usoro rotary mkpọpu ala rig na-exported karịa mba 30 na mpaghara gụnyere North America, Africa, Middle East, Canada, India, Thailand, Malaysia, na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia .
Xuzhou Dinghua Construction Machinery Co., Ltd. (XZDH) e guzobere na 2015. Ọ bụ a nkwonkwo-ngwaahịa ụlọ ọrụ na ulo oru mbo isi obodo nke 10 nde yuan.
The ụlọ ọrụ na-ekpuchi ebe ndị 50,000 square mita, na nsonye 36,000 square mita nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe ụlọ. Anyị na-onwem na ihe karịrị 200 ohuru ọhụrụ ụlọ ọrụ.
Anyị ipuiche ke imewe nke nnukwu-ọnụ ọgụgụ injinịa ígwè owuwu, na anyị kwa afọ mmepụta ike bụ banyere 20,000 tọn. Anyị na-eji igwe dị elu maka CNC, ịgbado ọkụ, ịkpụzi na ọgwụgwọ okpomọkụ na usoro mmepụta.
Ihe ndị bụ isi nke XZDH bụ ihe eji egwupu ihe ndozi, mmiri na-egwu mmiri, ihe na-egwu mmiri na ọtụtụ akụkụ igwe. Ha bụ ụdị ọkọlọtọ mara mba ahụ.
Xuzhou Dinghua Engineering Machinery nwere dị iche iche ụdị nke kwụ directional mkpọpu ala rigs, mmiri ọma mkpọpu ala rigs, na rotary mkpọ rigs. The ụlọ ọrụ nwere ọkachamara injinia, ọkachamara oru pesonel, ọkachamara mgbe-sales ọrụ, na nwere nzere nke mma mmepụta ikike, na iru eru nke pụrụ iche ngwá mmepụta ikike nke Ndị mmadụ Republic of China, na iru eru nke enterprise nchekwa pesonel. onye na ndi isi oru oru ya na ndi n’aru oru n’iru nile ji asambodo iru eru.
Ulo oru nke ulo oru nke ulo oru: nlezianya, n 'iru ala, gbasaa n'ihu, na ihe ohuru.
Ebumnuche ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ: inyocha teknụzụ injinia ma nye azịza maka nrụpụta injinia ụwa na mmepe na-adigide.
The ụlọ ọrụ ebighi ebi nkwa: aha mbụ, iguzosi ike n'ezi dabeere, ahịa mbụ, mbụ na klas ọrụ, nchekwa mbụ, ndị mmadụ na-agba mbọ, àgwà mbụ, na nkenke gbakwasara.
Nkà ihe ọmụma ụlọ ọrụ ahụ: ọkachamara, raara onwe ya nye, raara onwe ya nye, ma na-a atta ntị, ka ndị ọrụ wee nwee ahụ iru ala.
Ebumnuche ụlọ ọrụ na ọhụụ: ahịa ndị ahịa, ijikọ ọnụ R & D, imepụta, na akụrụngwa ọrụ Mepụta uru maka ndị ahịa ma nyere ndị ahịa aka inweta ihe ịga nke ọma site na ikike jikọtara ọnụ nke ịdị mma a pụrụ ịdabere na ya, teknụzụ na-eduga, nchekwa gburugburu ebe obibi na arụmọrụ na-emezu ihe ndị bara uru n'ezie nke ndị ahịa, ma merie aka na ntụkwasị obi nke ndị ahịa
Companylọ ọrụ ahụ ga-abụ nke ụwa niile, gbalịsie ike ịnọgide na-egbo mkpa ndị ahịa, yana inyere ndị ahịa aka ịga nke ọma bụ ihe ndabere maka nlanarị na mmepe anyị. Companylọ ọrụ ahụ dị njikere ịkwado ụdị ndụ niile, mpaghara niile, ụlọ ọrụ niile, ụlọ ọrụ niile, ndị ahịa nke ụlọ ọrụ ahụ, ndị enyi ọhụrụ na ndị enyi ọhụụ guzobere mmekọrịta na-arụkọ ọrụ dabere na nha anya na ọbụbụenyi, uru ọ bụla ma merie mmeri, ma jeere gị ozi. ikwesị ntụkwasị obi.
borehole mkpọpu ala igwe, Kwụ Directional Drilling rig, HDd mkpọpu ala igwe, HDd rig,